Ire nke iPhones àmà a kpam kpam abawanye site ụbọchị nwere ike ekewet a ọtụtụ ihe, otu nke ha ịbụ pụtara ìhè igwefoto mma. Apple dị ka a ụlọ ọrụ mere ka ịrịba ama ọganihu ihe karịrị afọ, nke bụ kpọmkwem ihe mere na ịpị ụfọdụ ndị kasị mma foto na elu àgwà videos bụ omume nri ebe a.
Part 1. Olee ka ihichapụ videos / fim iPhone
Dị ukwuu dị ka ịpị foto ndị a ụtọ n'ihi na ọtụtụ shutterbugs eji ha ịna iPhones, ihichapụ vidiyo ma ọ bụ igwefoto mpịakọta ha ngwaọrụ dị oké mkpa. Ihu ọma, usoro bụ a tad siiri ọtụtụ chepụta.
E nwere 3 iche iche ụzọ nke ihichapụ videos dabere na nke ikpeazụ si ụdị. Ego otú:
Synced si iTunes
-Simply Mgbata 'videos' iji na-enweta video ndepụta.
-Swipe Azụ na-apụta (site n'aka ekpe gaa n'aka nri) na faịlụ na kwesịrị na-ehichapụ.
-Tap On 'ihichapụ'.
-Tap On 'photos'.
-Open 'Igwefoto mpịakọta'.
-Select Video ga-ehichapụ.
-Aga n'Ihu Ugbu mgbata 'ahịhịa pụrụ' na akara ngosi na ihuenyo si ala-nri ọnọdụ.
-Click On 'ihichapụ video'.
-Open 'Photos' ngwa.
-Aga n'Ihu Ugbu chọta 'igwefoto mpịakọta'.
-Click On 'họrọ' na ihuenyo si elu-nri ọnọdụ.
-Choose Foto na vidiyo na ị chọrọ ka ihichapụ.
Mkpa maka ohere bụ otu n'ime isi ihe mere ihichapụ enweghị isi photos ama kwadoo-aghọ oké mkpa. Ị nwere ike ịhọrọ ihichapụ ha si gị igwefoto mpịakọta na iPhone onwe ya ma ọ bụ nanị jikọọ gadget ọ bụla na kọmputa site na n'otu ụlọ ọrụ.
Mgbe ihichapụ multiple photos
Họrọ 'photos' na akara ngosi na Ihuenyo gị iPhone (there'a a odo ifuru n'elu).
Chọta igwefoto mpịakọta ka ọdịnaya n'ime.
Ugbu a họrọ 'ekere òkè' button na n'elu nke ihuenyo (na a rektangulu nwere akụ na-atụ outwards).
Ugbu a enweta na thumbnail oyiyi maka ọ bụla foto na-ehichapụ.
Chọta 'ihichapụ' button-ewepụ ihe niile họrọ foto site na iPhone igwefoto mpịakọta.
Mgbe ihichapụ multiple foto na iji iTunes
Nzọụkwụ 1. Gbalịa Ijikọ iPhone na kọmputa site na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. ẹkedori iTunes ngwa pịa aha gị iPhone n'okpuru isiokwu nke ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. pịa 'photos' taabụ.
Nzọụkwụ 4. Chọta igbe nri na-esote 'mmekọrịta photos' ma pịa 'wepụ photos'.
Nzọụkwụ 5. Pịa 'itinye' button ka ihichapụ niile foto na iPhone igwefoto mpịakọta.
Mgbe ihichapụ photos n'otu otu mgbe
Nzọụkwụ 1. Họrọ 'photos' na akara ngosi na n'ụlọ ihuenyo.
Nzọụkwụ 2. Họrọ otu foto na-ehichapụ si igwefoto mpịakọta.
Nzọụkwụ 3. Kpatụ 'ahịhịa' akara ngosi dị na ihuenyo si ala.
Nzọụkwụ 4. Họrọ 'Nhichapụ foto' button ka ihichapụ foto na-ewepụ site igwefoto mpịakọta.
Tinyegharịa usoro maka foto ọ bụla ga-ewepụ.
Part 2. Olee ka ihichapụ Igwefoto Roll / foto site na iPhone
N'ihe banyere nhicha ọzọ foto na vidiyo si iPhones bụ nchegbu, Wondershare SafeEraser a maara na-enye ndị kasị dị irè na a pụrụ ịdabere data nchebe ngwọta. Ọ bụghị nanị na ọ na-ewepụ ihe niile na data site na ngwaọrụ na ọ pụtara na ka, resetting usoro ntọala na-arụzu site otu click. Sịkwa, ọ bụ a ezi 'dị ọcha wepụrụ ebubo' ngwọta maka eme pụọ na-enweghị isi data.
Iji Wondershare SafeEraser ka ihichapụ foto site na iPhone
Were a anya otú na-eji ya ga-emepụta kacha utịp:
Step1: Pịa na ihichapu onwe data n'akụkụ aka nri nke isi window.
Nzọụkwụ 2: Ị ga-ahụ na ihe omume ahụ ga-nyochaa na ike iṅomi niile data nke ngwaọrụ gị-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 3: Mgbe Doppler okokụre, niile onwe data nwere ike hụrụ depụtara na dị iche iche ige. Pịa na igbe ọzọ na photos ị ga-achọ ka ihichapụ. N'ikpeazụ, pịa ihichapu Ugbu a ka ihichapụ photos.
Nzọụkwụ 4: Ị ga-jụrụ pịnyere 'Nhichapụ' okwu iji cofirm nhichapụ nke photos permanentely.
Nzọụkwụ 5: Mgbe nhichapụ nke photos-agwụ agwụ, ozi nke 'ọma ehichapu' ga-gbapụta. N'oge a dum usoro, jide n'aka na ị na ngwaọrụ ma kọmputa jikọọ onye ọ bụla ọzọ nke ọma.
Part 3. One Pịa mpikota onu foto niile na gị iPhone ịzọpụta ohere ruo 75%
Nzọụkwụ 1: Pịa na 'Photo Compressor' ịhụ otú photos anya dị ka.
Nzọụkwụ 2: Pịa on 'Malite iṅomi' idowe ọzọ ohere. SafeEraser-ewe nanị ole na ole sekọnd mezue iṅomi.
Nzọụkwụ 3: Pịa 'Malite' na-ekwe ka SafeEraser mpikota onu foto.
> Resource> Ihichapu> Olee otú iji Hichapụ Videos / Igwefoto Roll si iPhone